murume ari kudzidzira nema dumbbells
Dumbbells chimwe chinhu chatinowanzoda uye kuvenga.Vazhinji vedu tine seti yezviratidziro zvekugara, zvichida muimba yedu yekurara, izvo zvose zviri chishandiso uye chiratidzo chehutano kana kuzvitarisira.Asi isu hatina kuishandisa munguva uye yakagara ipapo, yakatitarisa, ichitonga.Dzimwe nguva zvinotoita kuti tinzwe zvakanyanya pamusoro...
Inguva yakareba sei kurovedza muviri kunofanira kugara kuti kubudirire?
Zvinhu zvishoma zvinounza punch ine hutano senge cardio: tsandanyama dzako, kusanganisira moyo wako, dziri kushanda nesimba.The Physical Activity Guidelines kune vekuAmerica zvakajeka kuti kana zvasvika kune cardio, "chero mari inobatsira, kazhinji yakawanda iri nani, uye vazhinji vekuAmerica vanonyanya kugadzikana," anodaro ex.
Akanakisa Dumbbells: gumi Maremu eKumba Workouts muna 2022
Dzimwe nguva, zvese zvaunoda pakuita kurovedza muviri kunoshanda idumbbell.Mushure memakumi ezviuru zvekudzokorora, aya ndiwo atinoda Biceps curls kana maburpees pamadumbbells?Triceps stretch or heavy dumbbell snatch?Chero chepfu yako yekusimba, takatsvaga Men's Health Hive Pfungwa dzekuunza y...
Iwe haufanirwe kuita cardio kuti uderedze uremu, kuramba kudzidziswa kunoshanda saizvozvo
Zvinoenderana neongororo yakaburitswa Kubvumbi 11 mukati Obesity Ongororo, kurovedza muviri senge kusimudza uremu kwakasanganiswa nekushomeka kwecalorie kunogona kubatsira kupisa mafuta uye kuderedza chikamu chemafuta emuviri.Vatsvagiri kubva kuEdith Cowan University kuAustralia neYunivhesiti yeCassias do Sul muBrazil vakaongorora data...
Midziyo yemitambo yepamba chirongwa chakatenderedzwa chekusimba
Kana zvasvika kune chirongwa chehutano hwakanaka, kune zvakawanda zvinobatsira pakuwedzera muchina wekukwasva.Semunhu aimbova mutevedzeri weOlympic weightlifter uye murairidzi wemitambo yemitambo, ndinotenda kuti michina yekukwasva inoita basa rinokosha mukudzidzira cardio yemutambi.Ndakaedza Hydrow , imwe yeakanyanya pop ...
Treadmill Workout: Yechokwadi Pfungwa Kubva Kuhutano Nyanzvi
Wese munhu anoita seanoda "chinotevera chakanakisa chinhu" kana tasvika pakusimba, asi dzimwe nguva zvakakosha kuti uone kana iyo yazvino maitiro ndeye yako.Kana usati wanzwa nezve 12-3-30 Treadmill Challenge, iwe ungangove uri mumwe weavo vanhu vakakwana ...
Kumhanya kunogona kuve kwakaoma cardio kurovedza muviri, asi ndeapi mamhasuru anoshandiswa kumhanya?
Kumhanya kunogona kunetsa kurovedzera muviri, asi imhasuru dzipi dzinoshandiswa pakumhanya?Chiitwa ichi chinowanzonzi kurovedza muviri muviri wose, asi dzimwe tsandanyama dzinonyanya kutsamira pane dzimwe.Idzi tsandanyama dzinoita basa rinokosha pakumhanya nadzo. kuchengetedza kugadzikana uye chimiro chakakodzera uye ...
Indoor nekunze kubhasikoro kuruka bhasikoro
Ichokwadi kuti pane kufanana pakati pemabhasikoro emukati nekunze, kusanganisira kushanda mhasuru dzakafanana - glutes, quads, hamstrings, uye gastrocnemius uye soleus (mhuru dzemhuru) pasinei nokuti unokwira kupi - - zvose zvinopa simba rako rekutsika - uye simba rimwechete. system.Asi ku...
Home Gym Weightlifting midziyo
Sokunge uchizviendesa kune gym hakusi kupedza simba repfungwa rakakwana, kana wasvika ikoko, wakatarisana nechivako chizere nemidziyo yekufambisa.Iwe unoderedza purogiramu yako yekurovedza muviri kune cardio, iyo inobatsira, asi wozozviwana wakatarisa pa. michina mishoma iyo yese inowana basa don...
kumba gym fitness midziyo Smith Machine
Kana makore mashoma apfuura akakupwisa kuti kurovedza muviri kumba ndiyo nzira yakanakisa yekugara wakagwinya, unogona kunge uchinetseka kuti imarii gym yekumba inodhura. Imwe nzira yekugadzira jimu yekumba ndeyekugadzirisa zvakare nzvimbo iripo yeimba yako uye. wobva wasarudza maekisesaizi aunoda.Pane zvakawanda zvekurovedzera muviri con...
kubudirira kukuru uye mipiro kusimba rekudzidziswa uye kurovedza muviri
Nyika yemitambo yesimba yakarasikirwa zvikuru munaKurume 24, 2022, apo ane mukurumbira powerlifter uye murairidzi Louie Simmons akashaya aine makore makumi manomwe nemana. Kushanda nesimba kwake, hungwaru, uye rudo rwemutambo zvave...
Kutarisa kumashure pane zvakabudirira zvikuru zvaLouie Simmons uye mipiro mukudzidziswa kwesimba uye maekisesaizi